Fowunela iNkxaso 0086-13833199589
EN877 Grey Cast Imibhobho yentsimbi
EN877 iGrey Cast izifakelo zentsimbi
IziNxibelelwano zeNtsimbi eStainless kunye neeKhola zokubamba
ASTM A888 Hubless Cast Imibhobho yentsimbi
I-ASTM A888 yeHubless Cast izifakelo zentsimbi kunye nemibhobho
EN545 598 Imibhobho yeDuctile & neFittings Flanged
Isigqubuthelo somhombiso kunye neGratings, iGully
Izahlulo zokugalela intsimbi engatyiwa
No-Hub Cast Iron Drainage inkqubo CISPI301/ASTM A-888
Inkqubo ye-No-Hub Cast Iron Drainage, imibhobho kunye nezixhobo zithotyelwe kwiimfuno ze-CISPI Standard 301 okanye i-ASTM A-888. Yonke imibhobho esetyenziswe kule nkqubo isebenzisa inkqubo yokuphosa i-centrifugal. Imibhobho kunye nezixhobo zixhunywe ngokudibanisa. Ukudibanisa kubandakanya ikhaka lentsimbi engatyiwa...
IziNxibelelwano zeNtsimbi eNgatyiwayo
ukudityaniswa kwensimbi engenasiphelo esetyenziswa kwisicelo esingaphezulu komhlaba kunekhola yensimbi engenasici kwi-EN10088 kwaye inomkhono odibeneyo we-EPDM elastomer ukuya kwi-EN681 (ISO 4633). Ukudibanisa kunokwenziwa kwiindidi ezahlukeneyo zekhola kunye neebholiti kwizinto ze-AISI 304 okanye i-AISI 316. Ukudibanisa ar...
EN877 umbhobho wentsimbi
Yonke imibhobho yentsimbi ye-EN877 esetyenziswa kwi-No-Hub Cast Iron Drainage system yenziwa kusetyenziswa inkqubo yokuphosa i-centrifugal. Imibhobho iphonswe ngaphandle kweesokethi kwaye ibonelelwe ngobude be-3M. Imibhobho igqunywe ngaphandle ngepeyinti ebomvu echasene nomhlwa kwaye ngaphakathi ngombala ocher tar free ep...
Ukufaneleka okugqwesileyo kombhobho we-drainage wasonta onomlomo obhetyebhetye
♦ Ubunzima obuncinci, ubude bokuhamba ngetoni nganye yombhobho bunokunyuswa nge-20% -30%. ♦ Umphezulu ngaphandle kwe-voids kunye neendawo ze-slag zihamba kakuhle kwaye zihle ukujonga. ♦ Udonga lombhobho lunobungqingqwa obulinganayo, ubume obubambeneyo, ukuqina okuphezulu kunye namandla oxinzelelo kunye nomthamo womtya. ♦ Ukuba nobudlelwane...
I-gasket yerabha yombhobho we-DCI
Igasket yerabha yonikezelo lwamanzi kunye nemibhobho yokuhambisa amanzi: Igasket yerabha yonikezelo lwamanzi kunye nemibhobho yokuhambisa amanzi yenziwa ngokwamkela irabha yendalo ekumgangatho ophezulu evela kumazwe angaphandle, irabha yebutadiene styrene enokumelana okugqwesileyo ukwaluphala, kunye nezinye izinto ezincedisayo. Imveliso ineenzuzo ezifana ne-wat egqwesileyo ...
Ukungeniswa kombhobho wentsimbi
Ukuguquguquka koyilo: Imibhobho iya kusebenza ngokukhuselekileyo kuluhlu olubanzi loxinzelelo lokusebenza, imithwalo yemisele kunye neemeko zokufakela. Uyilo olusemgangathweni lubandakanya into enesisa yokhuseleko ukukhusela kwizinto ezingaziwayo. Ukuphatha ngokulula: Imibhobho yentsimbi eneDuctile inokulawulwa lula ngaphantsi nangaphandle kwe-exis...
Imiyalelo yoFakelo(umbhobho, ukufakwa, ukudibanisa)
Imibhobho yentsimbi yentsimbi inikezelwa ngobude obuqhelekileyo beemitha ezi-3, ezinokunqunyulwa kwisayithi ukuya kubude obufunekayo. Ukuqinisekisa ukufakela, ukusika kufuneka kuhlale kusenziwa kwi-angle echanekileyo kwi-axis yombhobho kwaye kungabi nama-burrs, ukuqhekeka njl njl. Ukusika Ukulinganisa ubude obufunayo bombhobho. Sika umbhobho...
I-Cast Iron Benefits
♦ Intsimbi yeCast engatshiyo ibonelela ngokuxhathisa umlilo. Intsimbi ayitshi, ayikhuphi rhasi xa ifudunyezwa kumaqondo obushushu aqhele ukufunyanwa kwisakhiwo somlilo. Ukumelana nokutshisa kunenzuzo eyongezelelweyo yokufuna izinto ezilula kunye nexabiso eliphantsi lokumisa umlilo kwi-annu...
Flexible Coupling Connection
UQhagamshelwano lweeMechanical Tee
I-Tee ye-Mechanical ibonelela ngokukhawuleza kwaye kulula ukukhupha i-grooved okanye i-threaded yesebe kunye nokuphelisa imfuno ye-welding okanye ukusetyenziswa kwe-tee yokunciphisa kunye ne-couplings. Sika nje umngxuma kubungakanani obuchaziweyo kwindawo elindelekileyo kwaye uqinise i-tee yomatshini kumbhobho ngamantongomane kunye neebholiti provi...
UQhagamshelwano loQhagamshelwano olungqongqo
1.Indlela yeTougue & Groove idityaniswe nedayamitha yesitshixo esifutshane kancinane ibonelela ngoomatshini kunye noqhagamshelo olukhuhlayo olukhokelela kwilungu eliqinileyo elinciphisa intshukumo ye-angular engafunekiyo. 2.Amazinyo okwakha kwi-coupling abambe igxalaba lomsele kwaye asebenze ekunciphiseni i-linear mo...
Umyalelo woFakelo lweFlange okanye iFlange Adapter
I-adaptha ye-Flange (i-adaptha ye-Flange, i-flange ene-threaded, i-flange) ingasetyenziselwa uqhagamshelo lwenguqu phakathi kombhobho ogrunjiweyo kunye nezixhobo kunye neevalvu ezineeflange. Idayamitha, indawo kunye nomlinganiselo womngxuma webholiti kwi-adaptha yeFlange ihambelana neebholithi zemigangatho yamazwe ngamazwe (G...
No-Hub Cast Iron Drainage inkqubo CISPI301...
Ukufaneleka okugqwesileyo kwe-drainage spun cast cast pip...